Android ဖုန်းများ - ဖုန်းများ၊ တက်ဘလက်များ၊ စမတ်နာရီများနှင့်အခြားအရာများ! | Androidsis (စာမျက်နှာ ၂၂)
Excelvan BL ပရိုဂျက်တာပြန်လည်သုံးသပ်
Excelvan BL, projector အများကြီးပိုများတယ်၊ အရွယ်အစား ၂၀၀ လက်မအရွယ်ရှိမျက်နှာပြင်အရွယ်အစား၊ Android၊ ဆက်သွယ်မှုကောင်းမွန်ပြီး built-in စပီကာတွေကိုကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်ပြီးပြီ။
Best Buy သည်တရားဝင် Chromecast3မတိုင်မီရောင်းချမည့် Chromecast XNUMX ကိုရောင်းချသည်
Huawei Y9 2019 - Huawei ၏အလယ်အလတ်တန်းစားအသစ်
Huawei Y9 2019 - အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်တရားဝင်စတင်ခြင်း။ ယနေ့မိတ်ဆက်သည့်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်မှဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Wear OS interface အသစ်သည်ပထမဆုံးနာရီများကိုစတင်ရောက်ရှိခဲ့သည်
Smartwatches သည် Wear OS မျက်နှာပြင်အသစ်သို့စတင်အဆင့်မြှင့်တင်သည်။ နာရီသို့လာမည့် update နှင့်ပတ်သက်။ ပိုမိုရှာဖွေပါ။
ZTE Axon9Pro ကိုအောက်တိုဘာလလယ်တွင်တရုတ်၌ရောင်းချမည်
ZTE Axon9Pro သည်အောက်တိုဘာလလယ်မှတရုတ်စျေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်လိမ့်မည်ဟုမကြာသေးမီကပင်ကုမ္ပဏီမှအတည်ပြုခဲ့သည်။
Google က Wear OS 2.1 ကိုဒီဇိုင်းနှင့်အသိပေးမှုစီမံခန့်ခွဲမှုတိုးတက်မှုများဖြင့်ကြေငြာခဲ့သည်
Google သည် Wear OS 2.1 ကိုလာမည့်အဓိကသတင်းကိုကြေငြာခဲ့သည်
Samsung Galaxy Note9ကိုအဓိကကင်မရာအဆင့်မြှင့်မှုများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်
Samsung Galaxy Note9သည်ဓာတ်ပုံကဏ္sectionတွင်တိုးတက်မှုရှိသည့်အသစ်ပြောင်းခြင်းအသစ်ကိုလက်ခံရရှိနေသည်။ ရှာတွေ့သည်!
Realme2Pro သည်အလယ်အလတ်တန်းစားစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်တရားဝင်ဖြစ်သည်
Realme2Pro ကို ၆.၃ လက်မ FHD + မျက်နှာပြင်၊ Snapdragon 6.3 နှင့်အခြားအရာများဖြင့်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ဒီနှစ်လယ်ပိုင်းအကွာအဝေးနှင့်ပတ်သက်။ အရာအားလုံးကိုသိပါ။
Samsung Galaxy J4 + နှင့် J6 + ကိုစပိန်နိုင်ငံသို့ရောက်ရှိလာသည်
ဆမ်ဆောင်းသည်စပိန်နိုင်ငံရှိ Galaxy J4 + နှင့် J6 + ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ စပိန်နိုင်ငံရှိကိုရီးယားကုမ္ပဏီမှဖုန်းနှစ်လုံးရောက်ရှိလာခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Renders သည် Pixel3XL ကိုအနက်၊ အဖြူနှင့်အဖြူဖြင့်ပြသည်
Google Pixel3XL ၏ပြန်ဆိုအသစ်များသည်အလွန်ဒီဇိုင်းပါသည့်အရောင်သုံးမျိုးကိုပြသသည်
Xiaomi Redmi Note6Pro: Xiaomi ဖုန်းအသစ်ဟာအခုတရားဝင်ပါ
Xiaomi Redmi Note6Pro: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်စတင်ခြင်း။ အာရှတွင်ရှိပြီးဖြစ်သော Xiaomi အသစ်၏အလယ်အလတ်တန်းစားအကုန်လုံးကိုရှာဖွေပါ။
Vivo က In-display fingerprint reader ၄ မျိုးဆက်ကိုကြေငြာခဲ့သည်
Vivo သည်ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်လက်ဗွေဖတ်သူများ၏စတုတ္ထမျိုးဆက်နှင့် Qualcomm ၏လက်မှအရှိန်မြှင့် DSP နည်းပညာကိုကြေငြာခဲ့သည်။
Apple Watch သည်စျေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံးစမတ်နာရီဖြစ်ပါသလား။
သီးသန့် Apple Watch စီးရီး4သည် ၁၈ နာရီအထိကြာမြင့်သည်။ ဘက်ထရီမှာ Achilles ဖနောင့်ဖြစ်သည်။
Android မှာခေါ်ဆိုမှုကိုလွှဲပြောင်းခြင်းဘယ်လိုဖွင့်နည်း၊ ပိတ်နည်း
သင်၏ Android မိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုလွှဲပြောင်းခြင်းကိုမည်သို့လုပ်ရမည်နည်း။ သင်၏ဖုန်းတွင်ဤလုပ်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်အဆင့်များကိုရှာဖွေပါ။
ပေါက်ကြားဖိတ်ကြားချက်တစ်ခုအရ OnePlus 6T ကိုအောက်တိုဘာ ၁၇ ရက်တွင်တင်ပြမည်
ယိုစိမ့်သောပုံရိပ်တစ်ခုက OnePlus 6T လွှတ်တင်ရေးပွဲသို့ဖိတ်ကြားချက်ကိုပြသပြီး၊ ယခုအောက်တိုဘာ ၁၇ ရက်သည်တရားဝင်ဖြစ်လာသည့်နေ့ရက်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့သိရှိရသည်။
Android စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့အာရုံခံကိရိယာကိုဘယ်လိုချိန်ညှိမလဲ။ သင်၏ Android ဖုန်းကိုရိုးရှင်းသောနည်းဖြင့်ချိန်ညှိနိုင်သည့်နည်းလမ်းများရှာဖွေပါ။
Evan Blass သည် Google Pixel3နှင့်3XL တို့၏ဒီဇိုင်းသစ်ကိုအတည်ပြုသည်
Google Pixel3နှင့်3XL ၏ဒီဇိုင်းသည် Evan Blass ၏ပေါက်ကြားမှုအသစ်တွင်တွေ့ရသည်။ ကုမ္ပဏီ၏နောက်ဖုန်းများမည်သို့ဖြစ်မည်ကိုရှာဖွေပါ။
ကိုရီးယားကုမ္ပဏီသည်ဥရောပ၌ Samsung Buds အတွက်မူပိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်ခဲ့သည်
Samsung Buds သည်ကြိုးမဲ့နားကြပ်ဖြစ်နိုင်ပြီး Bixby ကိုကိုယ်ပိုင်လက်ထောက်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ အလောင်းအစားအားလုံးပေါ်သည်။
Huawei ၏အဆိုအရ Kirin 980 သည် Apple ၏ A12 Bionic ထက်သာလွန်သည်
Huawei ၏ Kirinj 980 သည် Apple ၏ A12 Bionic chipset ထက်သာလွန်ကြောင်းတရုတ်ကုမ္ပဏီကပြောကြားခဲ့သည်။ ဒီအမှတ်တံဆိပ်ကြေညာချက်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
OnePlus 6T သည်အစစ်အမှန်ဓါတ်ပုံများတွင်ထင်ရှားပြီး၎င်း၏ဒီဇိုင်းကိုဖော်ထုတ်နိုင်သည်
OnePlus 6T သည်ဓာတ်ပုံများ၏ပုံရိပ်ဖြစ်ပြီး၎င်း၏ Waterdrop ဒီဇိုင်းကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ၏နောက်တန်းအလံသည်အဘယ်သို့ဖြစ်မည်ကိုရှာဖွေပါ။
Honor သည် Huawei နှင့်ကွဲသွားမည်မဟုတ်ပါ
တရုတ်နိုင်ငံရှိမီဒီယာအမျိုးမျိုးမှကောလာဟလများအရ Honor နှင့် Huawei တို့သည်စီးပွားရေးအုပ်စုတစ်ခုတည်းအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိလိမ့်မည်ဟုအတည်ပြုခဲ့သည်။
ထိပ်တန်း Banggood ကမ်းလှမ်းချက်များ - စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက်မှ ၃၀ ရက်အထိ၊
၂၀၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၄ မှ ၃၀၊ ၂၀၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက်မှ ၃၀ ရက်တို့၏သီတင်းပတ်အသစ်များဖြင့်အဆင့်မြှင့်တင်ထားသည်
ယခုသင်သည် Oukitel WP2 ကိုယူရို ၁၉၀ သာကြိုတင်မှာယူနိုင်သည်
သင်၏စမတ်ဖုန်းအဟောင်းကိုမကြာမီအသစ်ပြောင်းရန်စီစဉ်နေပြီးသင်က Shock, fall နှင့်ရေဒဏ်ခံနိုင်သည့်မော်ဒယ်တစ်ခုကိုရှာဖွေနေပါက Oukitel WP2 သည်သင်ရှာဖွေနေသောပုံစံဖြစ်လိမ့်မည်။
Xiaomi သည်နိုင်ငံတကာ Xiaomi Mi 8 Lite ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလွှတ်တင်မှုစတင်ကြေညာခဲ့သည်
Xiaomi Mi 8 Lite ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလွှတ်တင်မှုကိုစတင်ကြေညာခဲ့သည်။ ဖုန်း၏နိုင်ငံတကာဖြန့်ချိမှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Huawei Mate 20 ၏ဗွီဒီယိုအသစ်တစ်ခုထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်
Huawei Mate 20 ဗွီဒီယိုအသစ်ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ဤပေါက်ကြားခဲ့သောဗွီဒီယိုကြောင့်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏နောက်ဆုံးဒီဇိုင်းကိုရှာဖွေပါ။
3 GB RAM နှင့်6GB ROM ပါဝင်သည့် Huawei Nova 128i အမျိုးအစားသစ်ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်
6 GB RAM ဗားရှင်းအသစ်နှင့် Huawei Nova 128i ၏သိုလှောင်မှုပမာဏ3GB ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင်အသစ်တခုအရောင် option ကို။
Samsung Galaxy A7 (2018) ကိုယခုသီတင်းပတ်အတွင်းတွင်အိန္ဒိယ၌စတင်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်
Samsung Galaxy A7 (2018) ကိုမနက်ဖြန်တွင်အိန္ဒိယ၌ဖြန့်ချိမည်။ Samsung ရဲ့နောက်သုံးဆနောက်ကင်မရာဖုန်းကိုစတင်မိတ်ဆက်ခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Samsung Galaxy A7 အသစ်၏နောက်ခံပုံများကိုကူးယူပါ
သင်သည် Samsung Galaxy A7 နောက်ခံပုံအသစ်များကိုနှစ်သက်လိုပါကဤဆောင်းပါး၌၎င်းတို့ကိုမည်သို့ download လုပ်ရမည်ကိုပြသည်။
Full Oppo A7 ၏ဗားရှင်း - ၆.၂″ HD + မျက်နှာပြင်၊ SD6.2 နှင့်ပိုမိုသောအရာများ
Oppo A7 ၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များပေါက်ကြားခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ၏နောက်ထပ်စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်သောစမတ်ဖုန်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
TENAA မှပေါက်ကြားခဲ့သော Huawei Y9 အသစ် (2019) ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
Huawei Y9 (2019) ကို၎င်း၏အဓိကနည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူ TENAA တွင်ပေါက်ကြားခဲ့သည်။ ဒီဖုန်းရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုသိထားပါ။
၄ င်းတို့သည် Samsung ၏စမတ်ဖုန်းအသစ်၏ကင်မရာ ၄ လုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည်
၎င်းတို့သည်အောက်တိုဘာ ၁၁ ရက်တွင်ကင်မရာ ၄ ခုဖြင့်တင်ဆက်မည့် terminal အသစ်၏သတ်မှတ်ချက်များဖြစ်သည်
Galaxy A9 Pro တွင်နောက်ကင်မရာလေးခုပါရှိသည်
Galaxy A9 Pro ၏ပထမဆုံး specs များထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးနောက်ကင်မရာ ၄ လုံးပါ ၀ င်သည့် Samsung ၏ဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Xiaomi Mi 8 Pro ကိုမကြာမီတရုတ်နိုင်ငံပြင်ပတွင်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်
Xiaomi Mi 8 Pro ကိုတရုတ်နိုင်ငံပြင်ပတွင်တရားဝင်ရောင်းချမည် တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်၏စတင်မှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Geekbench မှ Realme2Pro ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်
Realme2Pro ဟာ Geekbench မှာပေါက်ကြားခဲ့တာပါ။ အိန္ဒိယစျေးကွက်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်သည့်ကုမ္ပဏီမှနောက်ထပ် terminal တစ်ခု၏ပေါက်ကြားမှုအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလေ့လာပါ။
Nokia 7.1 Plus ၏ rendering သည်ဗီဒီယိုတွင်ပေါ်လာပြီး၎င်း၏ဒီဇိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်ဖော်ပြသည်
Nokia3Plus ၏ 7.1D ဒီဇိုင်းကို video-rendering ဖြင့်စစ်ထုတ်သည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏နောက်ထပ်ကိရိယာအကြောင်းလေ့လာပါ။
Android Pie ၏ဒုတိယ beta သည် Huawei ဖုန်းအသစ်များအတွက်ဖြစ်သည်
Android Pie beta အသစ်သည် Huawei နှင့် Honor ဖုန်းများအတွက်ဖြစ်သည်။ တိုးတက်မှုများနှင့်လုပ်ဆောင်မှုအသစ်များယူဆောင်လာသည့် beta အသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Lenovo Z5 Pro ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကုမ္ပဏီ၏နောက်ထပ်အထင်ကရဖြစ်အောင်စစ်ထုတ်ခဲ့သည်
Lenovo Z5 Pro ၏နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များအများအပြားပေါက်ကြားခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီမှလာမည့်စမတ်ဖုန်းအကြောင်းလေ့လာပါ။
OnePlus6တွင် Android 9.0 Pie တည်ငြိမ်စွာရှိပြီးဖြစ်သည်
OnePlus6သည် Android 9.0 Pie သို့အဆင့်မြှင့်ထားပြီးဖြစ်သည်။ Google operating system ၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းဖြစ်သည်။ အသေးစိတ်ကိုသင့်အားပေးသည်။
Huawei သည် iPhone XS ကို ၀ ယ်ရန်တန်းစီနေသောလူများအားအားသွင်းနိုင်သည့်ဘက္ထရီကိုပေးသည်
အာရှထုတ်လုပ်သူ Huawei သည် Apple Store ၏တန်းစီတန်းစီအားဖြင့်အားပြန်သွင်းနိုင်သည့်ဓာတ်အား 200 mAh ဘက်ထရီများကိုထုတ်ပေးသည်။
Xiaomi Mi 5s Plus သည် Android 8.0 Oreo ကိုရရှိထားပြီးဖြစ်သည်
Xiaomi Mi 5s Plus သည်အသစ်ပြောင်းခြင်းအသစ်ကြောင့် Android 8.0 Oreo ကိုရရှိသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုသိထားပါ။
Pocophone F1 သည်မျက်နှာသော့ဖွင့်ခြင်းကိုသက်ဝင်စေသော update ကိုလက်ခံရရှိသည်
မကြာသေးမီလများကကြယ်ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုဖြစ်သည့် Pocoph9ne F1 သည်မျက်နှာသော့ဖွင့်ခြင်းကိုသက်ဝင်စေသည့်နောက်ဆုံးသတင်းကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
Huawei ၏ပထမ ဦး ဆုံး 5G ဖုန်းသည်ခေါက်။ အသုံးပြုနိုင်သည်
ပထမ ဦး ဆုံး 5G ပါသော Huawei ဖုန်းကိုခေါက်နိုင်လိမ့်မည်။ 2019 နှစ်လယ်တွင်ဈေးကွက်သို့ရောက်ရှိလာသောတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်မှဤဖုန်းအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Nokia7Plus ကိုတရားဝင်တရားဝင်ဖြန့်ချီသည်
Nokia7Plus သည် Digital Wellbeing ကိုယခု download ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ကုမ္ပဏီဖုန်းသို့ပထမ ဦး ဆုံးရောက်သောဤအပလီကေးရှင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Asus ROG ဖုန်းကိုအောက်တိုဘာလတွင်ရောက်ရှိမည်
Asus ROG ဖုန်းကိုဥရောပတွင်အောက်တိုဘာလကုန်ပိုင်းတွင်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။ ဥရောပ၌ဤဖုန်းစတင်ခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Nokia သည်အောက်တိုဘာ ၄ ရက်တွင်၎င်း၏ဖုန်းအသစ်ကိုပြသမည်
Nokia သည်အောက်တိုဘာ ၄ ရက်တွင်၎င်း၏ဖုန်းအသစ်ကိုပြသမည်။ ကုမ္ပဏီမှတရားဝင်တင်ဆက်မည့်ဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Xiaai Smart Alarm Clock, Xiaomi ၏စမတ်နာရီသစ်ကိုယူရို ၂၀ အောက်သာပေးမည်
Xiaomi သည်အလွန်စျေးသိပ်မကြီးသည့်ကိရိယာအသစ်တစ်ခုကိုစတင်မိတ်ဆက်လိုက်သည်။ Xiaaii Smart Alarm Clock, Xiaomi ၏စမတ်နာရီအသစ်အကြောင်းပြောနေသည်။
Meizu သည်လာမည့်နှစ်တွင် 5G စမတ်ဖုန်းကိုစတင်မည်မဟုတ်
Meizu ၏စီအီးအို၏နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်အရတရုတ်ကုမ္ပဏီသည်လာမည့်နှစ်တွင် 5G ကွန်ယက်ကိုထောက်ပံ့နိုင်သည့်စမတ်ဖုန်းကိုထုတ်လုပ်တော့မည်မဟုတ်။
Nokia 7.1 Plus ၏ဒီဇိုင်းနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များပေါက်ကြားခဲ့သည်
Nokia 7.1 Plus - ဒီဇိုင်းနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များပေါက်ကြားခြင်း။ မကြာမီစျေးကွက်တွင်ရောက်ရှိတော့မည်ဖြစ်သောဤအမှတ်တံဆိပ်၏ပရီမီယံအလယ်အလတ်တန်းစားသစ်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
TOP သည် LightInTheBox ကိုကမ်းလှမ်းသည်
TOP သည် LightInTheBox ကိုစက်တင်ဘာလ ၂၀၁၈ တွင်အကောင်းဆုံးကမ်းလှမ်းမှုများကိုပေးသည်။ စမတ်ဖုန်းများ၊ တက်ဘလက်များ၊ လက်ပ်တော့များ၊ အိတ်များ၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်အခြား gadgets များစွာကိုစျေးနှုန်းများဖြင့် ၀ ယ်ယူနိုင်သောလူကြိုက်များသောစတိုးတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိသောကမ်းလှမ်းချက်များကိုပိုမိုရှာဖွေပါ။ အလွန်ကောင်းသောကမ်းလှမ်းမှုသည်နောက်ဆုံးနာရီနှင့်သင် NOW ကအားသာချက်ယူရန်ရှိသည်။ ဝင်ကြ!
MIUI 10 အပါအဝင် MIUI အတွက်အခင်းအကျင်းများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်နည်း
Xiaomi Mi 8 Lite ကိုတရုတ်နိုင်ငံပြင်ပတွင်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်
Xiaomi Mi 8 ကိုနိုင်ငံတကာစျေးကွက်များတွင်စတင်ဖြန့်ချိမည် ဤဖုန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံပြင်ပရှိစျေးကွက်သစ်များတွင်စတင်ခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
OnePlus 6T ၏ပထမဆုံးထုတ်ပြန်ချက်သည်ဤတွင်ရှိသည်
OnePlus 6T ၏ပထမဆုံးတရားဝင်ကြေငြာချက်ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ ၎င်း၏ပထမဆုံးတီဗီကြော်ငြာမှ ကျေးဇူးတင်၍ အမှတ်တံဆိပ်၏အဆင့်မြင့်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Galaxy A7 2018 - နောက်ကင်မရာသုံးခုပါသောပထမဆုံး Samsung
Samsung Galaxy A7 2018: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်စတင်ခြင်း။ နောက်ကင်မရာသုံးခုပါသည့်ပထမဆုံး Samsung အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Google Home Mini သည်စျေးကွက်တွင်ရောင်းအားအကောင်းဆုံးစပီကာဖြစ်သည်
Google Home Mini သည်စပီကာစျေးကွက်ကို ဦး ဆောင်သည်။ ကမ္ဘာတစ်လွှားရှိဂူးဂဲလ်စပီကာရောင်းအားအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ယခုအချိန်တွင် Galaxy Note9ပေါ်ရှိ Bixby ခလုတ်ကိုသော့ခတ်နိုင်သည်
Galaxy Note9ရှိ Bixby ခလုတ်ကိုသင်ပိတ်နိုင်သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ high-end ရှိလက်ထောက်ခလုတ်ကိုသင်မည်သို့ပိတ်ဆို့နိုင်သည်ကိုလေ့လာပါ။
HMD Global ကုမ္ပဏီသည်ဂိမ်းကစားသူများအတွက်စမတ်ဖုန်းတစ်ခုပြုလုပ်နေသည်။ Nokia ၏အစီအစဉ်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
5G အထောက်အပံ့ပါဝင်သည့်ပထမဆုံး Huawei ဖုန်းကိုလာမည့်နှစ်တွင်လာမည်
Huawei သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်နှစ်လယ်ပိုင်းတွင် 5G ဖုန်းကိုစတင်မိတ်ဆက်လိမ့်မည်။ Kirin 2019 ဖြင့်လက်မှတ်ရေးထိုးထားသောဖုန်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလေ့လာပါ။
Meizu V8 နှင့် V8 Pro တို့သည်တရုတ်ကုမ္ပဏီ၏စီးပွားရေးအလယ်အလတ်တန်းစားသစ်ဖြစ်သည်
Meizu သည်အလယ်အလတ်တန်းစားကိရိယာသစ်နှစ်မျိုးကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည် - Meizu V8 နှင့် V8 Pro ။ သူတို့၏နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ အင်္ဂါရပ်များနှင့်စျေးနှုန်းများကိုသိသည်။
Xiaomi Mi 8 Pro - ဖန်သားပြင်ထဲ၌လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာပါသည့်မော်ဒယ်သစ်
Xiaomi Mi 8 Pro: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်စတင်ခြင်း။ ဒီကနေ့တရားဝင်တရား ၀ င်တင်သွင်းထားတဲ့တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်ရဲ့အကြောင်းအရင်းကိုရှာဖွေပါ။
Xiaomi Mi 8 Lite: Xiaomi ရဲ့အလယ်အလတ်တန်းစားအသစ်
Xiaomi Mi 8: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်တရားဝင်ဖြန့်ချိခြင်း။ Xiaomi ၏အလယ်အလတ်တန်းစားဖုန်းအသစ်အကြောင်းယနေ့ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။
Meizu X8 ကို ၆.၂ လက်မ FHD + panel, Snapdragon 6.2 နှင့်ထို့ထက်ပိုသည်
Meizu X8 သည်တရားဝင်ဖြစ်သည်။ Qualcomm မှ octa-core Snapdragon 710 ပရိုဆက်ဆာဖြင့်ကုမ္ပဏီ၏မိုဘိုင်းဖုန်းအသစ်အကြောင်းလေ့လာပါ။
Xiaomi သည် Android TV ဖြင့်ရုပ်မြင်သံကြားသုံးခုတွင်အလုပ်လုပ်သည်
Xiaomi သည် Android TV ဖြင့်တီဗွီသုံးခုကိုစတင်မိတ်ဆက်မည်။ မကြာမီဥရောပသို့ရောက်ရှိလာတော့မည့်ကုမ္ပဏီ၏ပုံစံအသစ်များအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Meizu 16X: ပရီမီယံအလယ်အလတ်တန်းစားသစ်သည်ယခုတရားဝင်ဖြစ်သည်
Meizu 16X: အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်တရားဝင်စတင်ခြင်း။ ဒီနေ့တရားဝင်တရားဝင်တင်ဆက်ထားသည့်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်မှဖုန်းအသစ်အကြောင်းအားလုံးရှာဖွေပါ။
Snapdragon 835 သည် Razer Phone2ကိုသုံးမည်လား။
Razer Phone2သည် Snapdragon 835 ကိုပရိုဆက်ဆာတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုလိမ့်မည်။ မနှစ်ကပရိုဆက်ဆာအသုံးပြုမည့်ကုမ္ပဏီ၏ဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Samsung ကစုစုပေါင်း Galaxy S10 လေးခုတင်ဆက်ပြသမယ်
Samsung က Galaxy S10 အကွာအဝေးတွင်မော်ဒယ်လေးမျိုးကိုထုတ်လုပ်မည်။ ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ၏ဒီအကွာအဝေးတွင်မည်သည့်ဖုန်းများ ၀ ယ်မည်ကိုပိုမိုရှာဖွေပါ။
Q2018 XNUMX အတွက်ဖုန်းငွေဖြည့်သူများ
Xiaomi ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်က Mi 8 Youth အမျိုးအစားနှစ်မျိုးကို gradient ဖြင့်အတည်ပြုသည်
ဖြန့်ချိပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာတွင် Mi 8 Youth Edition ဟုလည်းလူသိများသော Xiaomi Mi 8 Lite သည် ...
Google Pixel3၏ပထမဆုံးတရားဝင်ပုံများကိုစစ်ထုတ်ခဲ့သည်
Pixel3၏ပထမဆုံးတရားဝင်ပုံများပေါက်ကြားခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ဂူဂဲလ်ဖုန်းအသစ်များ၏ဒီဇိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာပါ။
Samsung Galaxy J4 + နှင့် Galaxy J6 + တို့သည်တရားဝင်ဖြစ်သည်
Samsung Galaxy J4 + နှင့် Galaxy J6 +: တရားဝင်သတ်မှတ်ချက်များ။ တရားဝင်ကုမ္ပဏီဖြစ်သောမော်ဒယ်လ်အသစ်နှစ်ခုအကြောင်းရှာဖွေပါ။
Realme ကအိန္ဒိယတွင်စမတ်ဖုန်းအလုံးရေတစ်သန်းရောင်းချခဲ့ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ အဆိုပါကိန်းဂဏန်းများ Realme 1 နှင့်2ပါဝင်သည်။
Xiaomi Redmi Note6Pro သည် Aliexpress တွင်၎င်း၏ပုံများ၊ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်စျေးနှုန်းများပါရှိသည်
Xiaomi Redmi Note6Pro ကို Aliexpress တွင်တွေ့ရသည်။ ဒီဖုန်းအကုန်လုံးကိုသိပြီ
Galaxy S8 သည် Emoji နှင့် Galaxy S9 ၏နှေးကွေးသောလုပ်ဆောင်မှုကို၎င်း၏နောက်ဆုံးသတင်းတွင်ရရှိသည်
Samsung Galaxy S8 ၏လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအသစ်ပြောင်းခြင်းအသစ်သည် Galaxy S9 ၏လက်မှလာသည့်အရေးကြီးသောအသစ်အဆန်းနှစ်မျိုးကိုပေးထားသည်
Xiaomi ကို MIUI 10 သို့မွမ်းမံနည်း
[APK] Xiaomi Mi Emoji ထည့်သွင်းပုံ
Nokia9ကို ၂၀၁၉ ဖေဖော်ဝါရီလအထိနှောင့်နှေးမှာပါ
Nokia9ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်မတိုင်မီအချိန်အထိဖြန့်ချိမည်ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီ၏အဆင့်မြင့်တင်ပို့မှုနှောင့်နှေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာပါ။
မကြာခင်မှာပဲ Samsung က Galaxy J range ကိုဖျက်ပစ်တော့မယ်
Samsung က Galaxy J. ၏အကွာအဝေးကိုဖယ်ရှားပစ်တော့မည်ဖြစ်သည်။ ကိုရီးယားကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏ဖုန်းအမျိုးအစားများတွင်မိတ်ဆက်မည့်အပြောင်းအလဲများကိုပိုမိုလေ့လာပါ။
Motorola One Power ကိုစက်တင်ဘာ ၂၄ ရက်တွင်အိန္ဒိယ၌စတင်မည်
Motorola သည် tweet တစ်ခုမှတဆင့်စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက်တွင်အိန္ဒိယသို့ရောက်ရှိမည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ ရှာတွေ့သည်။
Huatei သည် Mate 20 Pro ၏သုံးဆစတုရန်းကင်မရာကိုအတည်ပြုသည်
အတည်ပြုသည်: Huawei Mate 20 Pro တွင်သုံးဆစတုရန်းနောက်ဘက်ကင်မရာတစ်ခုပါလိမ့်မည်။ Huawei ၏အဆင့်မြင့်ကင်မရာများအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
The Honor Magic2ကိုအောက်တိုဘာလကုန်တွင်ပြသပါမည်
အောက်တိုဘာ ၂၆ ရက်တွင် Honor Magic2ကိုတရားဝင်ဖြန့်ချိမည်။ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏အဆင့်မြင့်သစ်၏တင်ပြချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာပါ။
Samsung သည် iPhone အတွက် OLED ဖန်သားပြင်များကိုတစ်ခုတည်းသောထုတ်လုပ်သူအဖြစ်ရပ်ဆိုင်းတော့မည်ဖြစ်သည်
iPhone မော်ဒယ်သစ်များ၏ OLED ပြားများကိုထုတ်လုပ်မည့်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ Samsung သည်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါ။
အသစ်သော Honor ဖုန်းသည်စျေးကွက်အတွင်းသို့ရောက်ရှိတော့မည်ဖြစ်သည်
TENAA ဒေတာဘေ့စ်တွင် Honor ဖုန်းအသစ်ကိုမှတ်ပုံတင်ထားသည်။ အမှတ်တံဆိပ်၏နောက်မိုဘိုင်း၏နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
အတည်ပြုလိုက်သည်: OnePlus 6T သည် ၃.၅ မီလီမီတာဂျက်အသံကော်နက်ရှင်အားနှုတ်ဆက်ပါမည်
မကြာသေးမီကပေါက်ကြားခဲ့သော OnePlus 6T အမှု၌ high-end တွင် 3.5mm Jack audio connector ရှိမည်မဟုတ်ကြောင်းအတည်ပြုသည်။
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition ကိုလကုန်တွင် MIUI 10 ရရှိမည်ဖြစ်သည်
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition သည်ယခုလ MIUI 10 ကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။ သင်၏ဖုန်းကိုဤကိုယ်ပိုင်ဗဟုသုတအဆင့်အလွှာကိုအဆင့်မြှင့်ခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Android Pie သည် Third-party handheld မှ Samsung Galaxy S6 သို့လာသည်
သင်က Samsung Galaxy S6 ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါကသင်ကံကောင်းပါစေ။ Android Pie သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန် ROM တစ်ခုဖြန့်ချိခဲ့သည်။
Xiaomi Redmi Note6Pro ကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များဖြင့်ပြန်လည်စစ်ထုတ်သည်
Xiaomi Redmi Note6Pro ၏အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များပေါက်ကြားခဲ့သည်။ နောက်လာမယ့်စမတ်ဖုန်းအကြောင်းတရုတ်ကုမ္ပဏီမှလေ့လာပါ။
Vivo V11 Pro သည်ဗီဒီယိုကို 4K ဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ရန်ခွင့်ပြုချက်အသစ်ရရှိသည်
Vivo V11 Pro သည်ဗွီဒီယိုကို 4K resolution ဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ရန်ခွင့်ပြုချက်အသစ်ကိုလက်ခံရရှိသည်။ အသေးစိတ်ကိုသင့်အားပေးသည်။
သင်၏ Amazfit အတွက်အခမဲ့နာရီအလွတ်များကိုဘယ်လိုဒေါင်းလုတ်လုပ်နိုင်မလဲ
Xiaomi အသစ်မှာ NFC ပါဝင်သော၊ နှလုံးခုန်နှုန်းအာရုံခံကိရိယာနှင့်များစွာရောက်ရှိလာသည်
Huami Amazfit Verge သည် Xiaomi ၏စမတ်နာရီဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံတွင်ဆက်လက်တည်ရှိတော့မည်ဖြစ်သည်။ နှလုံးခုန်နှုန်းအာရုံခံကိရိယာနှင့် NFC ပါသောနာရီ။
Galaxy Note ၏ပေါက်ကွဲမှုများသည်ဈေးကွက်သို့ပြန်သွားသည်။ အခုတော့ Note9အထိပါပဲ
တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ပြီးနောက်တစ်လအကြာတွင်မျိုးဆက်သစ်ဖြစ်သော Note9သည်ပထမဆုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
Galaxy J4 + နှင့် J6 + တို့သည် Samsung ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ရှိသည်
Galaxy J4 + နှင့် J6 + တို့ကို Samsung ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ဖော်ပြသည်။ စက်တင်ဘာ ၂၅ ရက်တွင်မိတ်ဆက်ခဲ့သောဤဖုန်းများအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Xiaomi Mi 8 မျက်နှာပြင်လက်ဗွေဆင်ဆာသည်ယခုအပတ်တွင်ရောက်ရှိမည်
Xiaomi က Mi 8 ကို On-screen fingerprint sensor ပါဝင်မယ်။ ယခုအပတ်တွင်တရားဝင်တင်ဆက်မည့်ဒီမော်ဒယ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Xiaomi Redmi Note6Pro တွင်ကင်မရာလေးလုံးပါရှိသည်
Xiaomi Redmi Note6Pro တွင်ကင်မရာလေးလုံးပါရှိသည်။ မကြာခင်ထွက်လာမယ့် Xiaomi ဖုန်းအသစ်အကြောင်းထပ်မံလေ့လာပါ။
Galaxy A9 Pro သည် Snapdragon 710 ကိုပရိုဆက်ဆာတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုလိမ့်မည်
Galaxy A9 Pro တွင် Snapdragon 710 ပရိုဆက်ဆာပါလိမ့်မည်။ ကိုရီးယားကုမ္ပဏီမှဖုန်းအသစ်အတွက်ရွေးချယ်လိုက်သည့်ပရိုဆက်ဆာအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ငွေရောင် Galaxy Note9ကိုနိုင်ငံပေါင်း ၃၀ တွင်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်
နိုင်ငံပေါင်း ၃၀ သည် Galaxy Note 30 ကိုငွေဖြင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ Samsung ရဲ့ high-end စမတ်ဖုန်းအသစ်ကိုအရောင်အသစ်နဲ့ထုတ်လွှင့်တဲ့အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Pocophone F1 သည်မကြာမီ Android Pie သို့အဆင့်မြှင့်တင်မည်
Android Pie သည်မကြာမီ Pocophone F1 သို့လာမည်။ မကြာမီတရုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ဖုန်းသို့လာမည့်နောက်ဆုံးသတင်းများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Samsung ၏စီအီးအို၏အဆိုအရ Galaxy S10 မှာကွဲပြားသောဒီဇိုင်းရှိသည်
Galaxy S10 ကမတူညီတဲ့ဒီဇိုင်းကိုပြသမယ်။ ကုမ္ပဏီ၏ဖုန်းအသစ်များ၏ဒီဇိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ Samsung ၏စီအီးအို၏အတည်ပြုချက်ကိုရှာဖွေပါ။
Moto G7 နှင့် G7 Plus ၏အမှတ်တံဆိပ်များကိုစစ်ထုတ်ခဲ့သည်
Moto G7 နှင့် G7 Plus တို့၏အမှတ်တံဆိပ်များသည်ပေါက်ကြားခဲ့သည်။ 2019 ခုနှစ်တွင်ရောက်ရှိလာသောအမှတ်တံဆိပ်၏ဖုန်းနှစ်လုံး၏အမှတ်တံဆိပ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
MIUI 10 သည်အခြားဖုန်းများအကြား Mi 5, Mi 6, Mi Mix2သို့ရောက်ရှိသည်
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ MIUI 10 ဗားရှင်းသည်ပထမဆုံး Xiaomi ဖုန်းများအတွက်ဖြစ်သည်။ စိတ်ကြိုက်အလွှာ၏ဤဗားရှင်းချဲ့ထွင်ခြင်းအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Huawei ဖုန်းအသစ်နှစ်လုံး TENAA တွင်ပေါက်ကြား
Huawei စမတ်ဖုန်းနှစ်ခုကို TENAA တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသည်။ တရုတ်ကုမ္ပဏီကငါတို့အတွက်ဘာပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာရှာကြည့်ပါ။
Xiaomi သည် iPhone အသစ်နှင့်ဈေးနှုန်းတူသည့်စတိုး ၃ ခုကိုသူ့စတိုးဆိုင်သို့ထည့်ခြင်းဖြင့် Apple ကိုလှောင်ပြောင်သည်
Xiaomi က Apple ကို iPhone အသစ်များနှင့်ဈေးနှုန်းတူညီပြီးနာမည်တူဖြင့်လက်ဆောင်ပါးကိုအဖြူရောင်ပါးလွှာပေးသည်။
Razer ဖုန်း ၂ ကိုအောက်တိုဘာ ၁၀ ရက်တွင်တင်ပြမည်
Razer Phone2ကိုအောက်တိုဘာ ၁၀ ရက်တွင်မိတ်ဆက်မည် ဂိမ်းစမတ်ဖုန်းမျိုးဆက်သစ်၏တင်ပြသည့်ရက်စွဲနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာပါ။
Meizu 16X ကို ArcSoft နည်းပညာဖြင့် Sony IMX380 နှင့် IMX350 အာရုံခံကိရိယာများဖြင့်ရောက်ရှိမည်
Meizu 16X ၏တရားဝင်ပိုစတာအသစ်တစ်ခုတွင်ဓာတ်ပုံမြှင့်တင်မှုအတွက် ArcSoft နည်းပညာဖြင့် Sony IMX380 နှင့် IMX350 အာရုံခံကိရိယာများပါ ၀ င်မည်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
Blackview BV9600 Plus သည်တရား ၀ င်ဖြစ်သည်
Blackview သည်ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်၏အသစ်စက်စက်ဖြစ်သော Blackview BV9600 Plus အားတရားဝင်ဖြစ်စေသည်။ အားလုံး၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုငါသိ၏။
Pixel3၏ပဟေteိအသစ်တစ်ခုသည်ပူနွေးသော Aqua အရောင်ရှိသည့်မော်ဒယ်တစ်မျိုးဖြစ်နိုင်ခြေကိုဖော်ပြသည်
Pixel 3: mint water နှင့်ပတ်သက်သောတတိယအရောင်ကိုသင်သိရန်အတွက်ဂူဂဲလ်မှကြော်ငြာတိုအသစ်တစ်ခုကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
iPhone XS သည် Antutu တွင်ထူးခြားသောရမှတ်ရရှိသည်။ ၎င်းသည်မည်သည့် Android ဖုန်းထက်မဆိုပိုမိုမြင့်မားသည်
iPhone XS အသစ်ကို Antutu မှာစမ်းသပ်ပြီးအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အဆင့်သတ်မှတ်ပေးတယ်။ အက်ပဲလ်ဖုန်းအသစ်ဖြင့်ရရှိသောရလဒ်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Oppo တွင်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အသင့်ဖြစ်သည့်အလယ်အလတ်တန်းစားဖုန်းသုံးလုံးပါ ၀ င်သည်
Oppo သည် TENAA ဒေတာဘေ့စ်တွင်စမတ်ဖုန်းအသစ်သုံးခုကိုမှတ်ပုံတင်ထားသည်။ တရုတ်ကုမ္ပဏီကငါတို့အတွက်ဘာပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာရှာကြည့်ပါ။
Nokia 3.1 သည် Android 8.1 Oreo ကိုစတင်ရရှိသည်
Nokia 3.1 သည် Android 8.1 Oreo သို့အဆင့်မြှင့်တင်သည်။ ဒီဖုန်းမှာစတင်နေပြီဖြစ်သောအသစ်ပြောင်းခြင်းအကြောင်းကိုပိုမိုလေ့လာပါ။
ဤရွေ့ကား Orange နှင့်အတူ iPhone Xs နှင့် XS MAX ၏စျေးနှုန်းများဖြစ်ကြသည်။ Apple ဖုန်းများရမည့်စျေးနှုန်းသစ်ကိုရှာဖွေပါ။
Honor View 10 သည် GPU Turbo ကိုလက်ခံရရှိပြီးဖြစ်သည်
Honor View 10 သည် GPU Turbo နည်းပညာရောက်ရှိသည့်အသစ်ပြောင်းခြင်းကိုခံယူနေသည်။ ဒီအသစ်အဆန်းအကြောင်းကိုပိုမိုလေ့လာပါ။
Xiaomi Mi 8 လူငယ်၏ရွှေရောင်ဗားရှင်းရှိလိမ့်မည်
Xiaomi Mi 8 လူငယ်ကိုရွှေဖြင့်လည်းရောင်းချမည်။ ယခုအပတ်တွင်ရောက်ရှိလာသည့်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်ဖုန်း၏ဗားရှင်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Samsung ကအောက်တိုဘာ ၁၁ ရက်တွင် quad ကင်မရာဖုန်းကိုပြသမည်
ကင်မရာလေးလုံးပါသော Samsung ဖုန်းကိုအောက်တိုဘာ ၁၁ ရက်တွင်ရောက်ရှိမည်။ ဒီဖုန်းကိုထုတ်ဖော်ပြမယ့်ရက်စွဲကိုပိုမိုရှာဖွေပါ။
Samsung Galaxy Note 8 အသစ်ကိုရရှိသည်။ ၎င်းသည် Super Slow-Motion နှင့် AR Emojis ကိုရရှိသည်
Super Galaxy Slow Motion နှင့် AR Emojis တွင်အထောက်အပံ့ဖြင့် Samsung Galaxy Note 8 သည်အသစ်ပြောင်းခြင်းကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အသေးစိတ်ကိုသင့်အားပေးသည်။
Moto Z အတွက်ကီးဘုတ်ပါသော Moto Mod ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီ
Moto Z အတွက်ကီးဘုတ်ပါသော Moto Mod ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီ။ ဤစီမံကိန်းကိုဖျက်သိမ်းရသည့်အကြောင်းရင်းများကိုပိုမိုရှာဖွေပါ။
Huawei ၏ခေါက်နိုင်သောဖုန်းကို 2019 တွင်လာသည်
Huawei သည်၎င်း၏ခေါက်နိုင်သောဖုန်းကို 2019 ခုနှစ်တွင်စတင်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီမှဤဖုန်း၏စျေးကွက်သို့ရောက်ရှိခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
iPhone XS, iPhone XS Max၊ Galaxy Note 9၊ Galaxy S9 + နှင့် Huawei P20 Pro၊
စက်တင်ဘာ ၁၂ ရက်မှာတင်ဆက်ခဲ့တဲ့ iPhone မျိုးဆက်သစ်ကကျွန်တော်တို့ကိုလက်ရှိ Android high-end နဲ့နှိုင်းယှဉ်ဖို့လှုံ့ဆော်ပေးတယ်
OnePlus 6T တွင် ၃.၅ မီလီမီတာအသံပေါက်မပါရှိပါ
OnePlus 3.5T တွင် 6mm audio jack မရှိပါ။ ဤမရှိခြင်း၏အကြောင်းရင်းများကိုတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်တွင်ပိုမိုရှာဖွေပါ။
Sony Xperia XZ3 ကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်
ယခုတွင်စပိန်ရှိ Sony Xperia XZ3 ကိုကြိုတင်မှာယူနိုင်သည်။ ဂျပန်ကုမ္ပဏီ၏အဆင့်မြင့်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကိုကြိုတင်မှာယူခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုရှာဖွေပါ။
လက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေးအက်ပလီကေးရှင်းများနှင့် Samsung နှင့် Google ပူးပေါင်း
Samsung နှင့် Google တို့သည်စာတိုပေးပို့ရေးအက်ပလီကေးရှင်းများကိုတိုက်ခိုက်နေကြသည်။ ဒီနယ်ပယ်မှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီနှစ်ခုရဲ့ပြည်ထောင်စုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
နောက်ဆုံးပေါ် Samsung Galaxy S10 မှာမူနောက်ကင်မရာသုံးဆဖြင့်ပါလာမည်
အချက်အလက်အသစ်များအရ Samsung Galaxy S10 သည်မတူညီသောမျိုးကွဲ ၃ မျိုးဖြင့်ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီးတစ်ခုမှာကင်မရာသုံးလုံးပါရှိသည်။ ဒီဖြစ်နိုင်ချေအချက်ကိုပိုမိုလေ့လာပါ။
Honor 8X ကိုအောက်တိုဘာ ၁၁ ရက်တွင်ဥရောပသို့ရောက်ရှိမည်
Honor 8X ကိုအောက်တိုဘာ ၁၁ ရက်တွင်ပရာ့ဂ်၌တင်ဆက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ လာမည့်လဥရောပဈေးကွက်သို့ Honor ဖုန်းရောက်ရှိလာခြင်းအကြောင်းလေ့လာပါ။
တရားဝင် Asus ROG ဖုန်းကို Snapdragon 845 ပါ ၀ င်သည့်ဂိမ်းတစ်ခုလုံးကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
Asus ROG ဖုန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်စတင်မိတ်ဆက်သည်။ အာရှစျေးကွက်တွင်၎င်း၏ထူးခြားချက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုများကိုလေ့လာပါ။
Xiaomi က၎င်းသည်စမတ်ဖုန်းများကိုဒေါ်လာ ၆၉၉ ထက်မြင့်သောဈေးနှုန်းဖြင့်ရောင်းချမည်မဟုတ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်
တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးလောကတွင်အခြေခံစံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်လာစေရန်အာရှကုမ္ပဏီ Xiaomi က ၄ င်း၏စမတ်ဖုန်းကိုဒေါ်လာ ၆၉၉ ထက်ပိုမိုသောဈေးနှုန်းဖြင့်ရောင်းချမည်မဟုတ်ကြောင်းအခိုင်အမာပြောကြားခဲ့သည်။
Huawei Watch GT နှင့် Honor Watch တို့တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုခံရသည်
Huawei Watch GT နှင့် Honor Watch တို့သည်ဥရောပ၌အသိအမှတ်ပြုခံရသည်။ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်မှဤနာရီနှစ်လုံးနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါက
Meizu 16X ကိုစက်တင်ဘာ ၁၉ ရက်တွင်ပြသပါမည်
တရားဝင်: Meizu 16X ကိုစက်တင်ဘာ ၁၉ ရက်တွင်မိတ်ဆက်မည်။ ဒီအမှတ်တံဆိပ်အသစ်ဖုန်းစတင်ခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
OnePlus နှင့် Google သည်ဂိမ်းတစ်ခုဖန်တီးရန်အတွက်အင်အားစုများစုစည်းထားသည်
OnePlus နှင့် Google သည် Crackables ဂိမ်းအသစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးသည်။ ကုမ္ပဏီနှစ်ခုအကြားပြည်ထောင်စုမှမွေးဖွားခဲ့သောဒီဂိမ်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Xiaomi Mi 8 လူငယ်ကို gradient ဖြင့်အတည်ပြုသည်
Xiaomi Mi 8 လူငယ်အမျိုးအစားကို gradient ပါ ၀ င်သည်။ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်မှဖုန်းအသစ်၏ဤဗားရှင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
5 တွင်၎င်း၏ပထမဆုံး 2019G ဖုန်းကိုစတင်မိတ်ဆက်ခြင်း
Honor သည်5ခုနှစ်တွင်၎င်း၏ပထမဆုံးဖုန်းကို 2019G အထောက်အပံ့ဖြင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်ဖြန့်ချိမည်။ တရုတ်ထုတ်လုပ်သူမှ 5G ရှိသည့်ပထမဆုံးဖုန်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Google က Pixel3ကိုပဲရစ်မှာလည်းတင်မယ်
Google Pixel3ကိုအောက်တိုဘာ ၉ ရက်တွင်ပဲရစ်တွင်ပြသသွားမည်ဖြစ်သည်။ ဖုန်းအသစ်ဖြန့်ချိမည့်နေ့အကြောင်းကိုပိုမိုရှာဖွေပါ။
စျေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စျေးနှုန်းအချိုးအစားရှိသည့်ဖုန်းများအား AnTuTu ကသတ်မှတ်သည်
Meizu 16X ကိုမနက်ဖြန်မှာပြသမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကဖုန်းအသစ်မှမျှော်လင့်ထားတာပါပဲ
Meizu 16X ကိုမနက်ဖြန်မှာကြေညာမှာပါ။ အာရှကုမ္ပဏီမှဒီဖုန်းအလယ်အလတ်တန်းစားဖုန်းနဲ့ဘာတွေပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတာလေ့လာကြည့်ပါ။
Da Vinci သည် Galaxy Note 10 ၏အတွင်းပိုင်းအမည်ဖြစ်သည်
Samsung က Galaxy Note 10 မှာ Da Vinci လို့ခေါ်တဲ့ Terminal ကို internal name အဖြစ်အလုပ်လုပ်နေပြီးဖြစ်သည်
Chuwi Hi9 PRO ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်ဗီဒီယို။ အခုဆိုရင်€ 120 ထက်နည်းသောရောင်းချမှု !!
MIUI 10 ၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအသစ်သောအင်္ဂါရပ် - နေရာချွေတာရန်အတွက် WhatsApp ကိုအချိန်တိုအတွင်းရှင်းလင်းပါ
ပြီးတော့ WhatsApp ကိုရှင်းလင်းခြင်းသည်ရုပ်ပုံများ၊ အသံမှတ်စုများ၊ ဗွီဒီယိုများနှင့်အခြားအရာများမှကြီးမားသောသိုလှောင်မှုအချက်အလက်အားလုံးကိုဖျက်ပစ်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
Vivo Y97 ကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်တရားဝင်ထုတ်လုပ်သည်
Vivo Y97 ကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်စတင်ထုတ်လုပ်သည်။ Mediatek မှ Helio P60 ပရိုဆက်ဆာဖြင့်ဒီအလယ်အလတ်တန်းစားစမတ်ဖုန်းအသစ်အကြောင်းအားလုံးလေ့လာပါ။
Huawei Y9 (2019) ကို TENAA တွင်စစ်ထုတ်ပြီး၎င်း၏ဒီဇိုင်းကိုဖော်ထုတ်သည်
Huawei Y9 (2019) သည်တရုတ်အေဂျင်စီဖြစ်သော TENAA တွင်ပေါက်ကြားခဲ့သည်။ လာမယ့်နှစ်အတွက်အာရှကုမ္ပဏီတခုကဘာတွေပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတာလေ့လာကြည့်ပါ။
DxOMark ၏အဆိုအရ Galaxy Note9ကင်မရာသည်စျေးကွက်အတွင်းဒုတိယမြောက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်
DxOMark မှယောက်ျားများသည်စမတ်ဖုန်းပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးကင်မရာ၏ဒုတိယနေရာတွင်အခြေချထားသော terminal တစ်ခုဖြစ်သည့် Galaxy Note9ကိုဆန်းစစ်လေ့လာပြီးဖြစ်သည်။
Huawei ဗီဒီယို - streaming ၀ န်ဆောင်မှုကိုစပိန်နိုင်ငံသို့ရောက်သည်
Huawei ဗီဒီယို - Huawei ၏ streaming ၀ န်ဆောင်မှုအသစ်။ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်တင်ပြပြီးသော streaming ပလက်ဖောင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Samsung Galaxy J6 + နှင့် Galaxy J4 + တို့ကိုမကြာမီကြေညာတော့မည်ဖြစ်သည်
Samsung က Galaxy J6 + နဲ့ Galaxy J4 + ကိုမကြာမီမိတ်ဆက်တော့မယ်။ ကုမ္ပဏီ၏အလယ်အလတ်တန်းစားဖုန်းနှစ်လုံးအသစ်ရောက်ရှိလာခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Samsung ကနို ၀ င်ဘာလတွင်၎င်း၏ခေါက်နိုင်သောဖုန်းကိုမိတ်ဆက်မည်မဟုတ်ပါ။ ကုမ္ပဏီ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကဖုန်းအား ၂၀၁၈ တွင်ဖော်ပြမည်မဟုတ်ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့သည်။
Xiaomi Mi 8 Youth ကိုစက်တင်ဘာ ၁၉ ရက်တွင်တင်ဆက်သွားမည်ဖြစ်သည်
Xiaomi Mi 8 Youth ကိုစက်တင်ဘာ ၁၉ ရက်တွင်တင်ဆက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ဖုန်းအသစ်၏တင်ဆက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Snapdragon Wear 3100: Wear OS အတွက်ပရိုဆက်ဆာအသစ်
Snapdragon Wear 3100: Wear OS နာရီများအတွက်ပရိုဆက်ဆာ။ တင်ပြပြီးသောအမှတ်တံဆိပ်မှဤပရိုဆက်ဆာအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
OnePlus 6T ကိုအောက်တိုဘာ ၁၇ ရက်တွင်တင်ပြနိူင်သည်
OnePlus 6T ကိုအောက်တိုဘာ ၁၇ ရက်တွင်တင်ပြမည်။ တရုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကိုတင်ဆက်မည့်ရက်စွဲနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုရှာဖွေပါ။
ဒီနှစ်မှာတော့ Google ကစမတ်နာရီအသစ်ကိုမိတ်ဆက်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး
များစွာသောသူတို့သည်တစ်နှစ်ပတ်လုံး Android Wear (ယခု WearOS) ကိုဝိုင်းရံထားသည့်ကောလာဟလများဖြစ်သည်။ အကယ်၍ Google ကပလက်ဖောင်းအားအေးခဲစေရန် ရည်ရွယ်၍ အင်တာနက်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီကြီးကယခုနှစ်တွင်စမတ်နာရီကိုပြသလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့သည်ဆိုပါက။
Samsung Galaxy J5 Prime သည် Android 8.0 Oreo ကိုရရှိထားပြီးဖြစ်သည်
Samsung Galaxy J5 Prime သည် Android 8.0 Oreo ကိုရရှိထားပြီးဖြစ်သည်။ Google ၏လည်ပတ်မှုစနစ်၏ပြန့်ပွားမှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Oppo A7X သည် ၆.၃ လက်မ FullHD + မျက်နှာပြင်၊ Helio P6.3 SoC နှင့်အခြားအရာများဖြစ်သည်
Oppo A7X သည်တရားဝင်ဖြစ်သည်။ တရုတ်ကုမ္ပဏီမှစမတ်ဖုန်းအသစ်၏နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများကိုလေ့လာပါ။
Moto G7 ကို rendering ဖြင့်စစ်ထုတ်ပြီး၎င်း၏ဒီဇိုင်းကိုထုတ်ဖော်ပြသသည်။
Moto G7 ၏အယူအဆဗီဒီယိုကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Moto G6 အတွက်ကောင်းသောဆက်ခံမှုဖြစ်မည့်၎င်း၏ဒီဇိုင်းအားလုံးကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။
Xiaomi Redmi Note6၏မျက်နှာပြင်သည် 6.18 not panel ရှိ notch နှင့်အတူပေါက်ကြားခဲ့သည်
Xiaomi Redmi Note6ရဲ့ panel နဲ့ protector ဟာပေါက်ကြားသွားမှာပါ။ ဒါက ၆.၁၈ လက်မဖြစ်ပြီးအထစ်ရှိတယ်။ ရှာတွေ့သည်!
Xiaoxun Children Smartwatch S2 သည်ကလေးငယ်များအတွက် ရည်ရွယ်၍ စျေးသိပ်မကြီးသည့်စမတ်နာရီ
Xiaoxun Children Smartwatch S2 ကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်စတင်ထုတ်လုပ်သည်။ ကလေးများအတွက်ပြုလုပ်ထားသည့်တန်ဖိုးနည်းစမတ်နာရီအသစ်အကြောင်းအားလုံးလေ့လာပါ။
Xiaomi Mi 8 Youth ဟာယိုစိမ့်နေပါတယ်
Xiaomi Mi 8 Youth ၏ဒီဇိုင်းနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုစစ်ထုတ်ခဲ့သည်။ Xiaomi Mi 8 မိသားစု ၀ င်သစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Huawei Mate 20 Pro ပုံရိပ်အသစ်ကိုစစ်ထုတ်ခဲ့သည်
Huawei Mate 20 Pro ၏စစ်ထုတ်ထားသောပုံရိပ်အသစ်သည်အောက်တိုဘာလတွင်ရောက်ရှိလာသောတရုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ယိုစိမ့်နေသောဓာတ်ပုံအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition သည်တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပရှိအခြားနာမည်တစ်ခုရှိလိမ့်မည်
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition သည်တရုတ်ပြည်ပြင်ပရှိ၎င်း၏အမည်ကိုပြောင်းလဲပစ်လိမ့်မည်။ အခြားစျေးကွက်များ၌နာမည်ကြီးတံဆိပ်နာမည်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
စမတ်ဖုန်းအသစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ TENAA: Vivo V1730EA
TENAA တွင် Vivo သည်အသစ်စက်စက်ဖြန့်ချိရန်ပြင်ဆင်နေပုံရသည်။ အဲဒါကိုသိအောင်လုပ်ပါ။
Motorola သည် Android Oreo ကို Moto G4 Plus တွင်စမ်းသပ်လိမ့်မည်
Motorola သည်မကြာမီ Moto G4 Plus တွင် Oreo ကိုစတင်စမ်းသပ်သည်။ Android Oreo ဖုန်းရောက်ရှိလာခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့် Oppo A7X ၏နောက်နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်ထွက်ပေါ်လာမည့်ထုတ်ကုန်များ
Oppo A7X သည်၎င်း၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အတူ renders များတွင်ပေါက်ကြားခဲ့သည်။ လာမည့်အာရှအလယ်အလတ်အဆင့်ကုမ္ပဏီအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Razer ဖုန်းနံပါတ်2သည် AnTuTu ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်လမ်းလျှောက်သွားသည်
Razer ဖုန်းနံပါတ်2သည် AnTuTu ကိုဖြတ်သန်း။ ၎င်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖော်ပြသည်။ ငါတို့ကုမ္ပဏီအတွက်စတိုးဆိုင်၌အဘယ်သို့ဆိုင်ထွက်ရှာပါ။
ဆမ်ဆောင်းထုတ်ကုန်အားလုံးသည် ၂၀၂၀ တွင်အတုထောက်လှမ်းမှုကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။
လတ်တလောသတင်းအချက်အလက်များအရ HTC သည်ထိုင်ဝမ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် Qualcomm Snapdragon 855. ကိုစမ်းသပ်နေကြောင်းပြသခဲ့သည်။
Xiaomi သည်အင်ဒိုနီးရှားစျေးကွက်၏အကြီးမားဆုံးသောရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်သည့်ဒုတိယစမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ ရှာတွေ့သည်!
ZTE Axon9Pro သည်ကွဲပြားခြားနားသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူ TENAA တွင်ပေါ်လာသည်
ZTE Axon9Pro ကို TENAA အသိအမှတ်ပြုစာမျက်နှာတွင်ဖော်ပြထားပြီးမတူညီသောလက္ခဏာများပါ ၀ င်သည်
Razer ဖုန်း ၂ ၏ပထမဆုံးအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုစစ်ထုတ်ခဲ့သည်
Razer Phone2၏ပထမဆုံးအသေးစိတ်အချက်အလက်များပေါက်ကြားခဲ့သည်။ ဂိမ်းစမတ်ဖုန်းအသစ်၏ပထမဆုံးအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလေ့လာပါ။
Moto G5 နှင့် G5 Plus သည် Android Oreo ကိုစတင်ရရှိသည်
Android Oreo သည် Moto G5 နှင့် G5 Plus ကိုစတင်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ဤအမှတ်တံဆိပ်ဖုန်းများအတွက်အသစ်ပြောင်းခြင်း၏ရောက်ရှိခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ထူးခြားသော Xiaomi M1808D2TE သည် TENAA ပတ်ပတ်လည်တွင်လမ်းလျှောက်နေသည်။ Mi 8 လူငယ်လား။
"M1808D2TE" ကုဒ်ပါသော Xiaomi ကို TENAA မှအသိအမှတ်ပြုလိုက်သည်။ အရာအားလုံးက Xiaomi Mi 8 လူငယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာပြနေတယ်။
Meizu 16X ကို AuTuTu တွင်အလယ်အလတ်တန်းစားအဖြစ်သတ်မှတ်သည်
Meizu 16X သည် AnTuTu ကိုတစ်ဖန်ပြန်လည်လေ့လာခဲ့သည်။ ဤအသစ်စစ်ထုတ်ခြင်းတွင် terminal မှရရှိသောရလဒ်ကိုဖော်ပြသည်။ အဲဒါကိုသိအောင်လုပ်ပါ။
Samsung Galaxy S9 အတွက် Google Pixel GCam ၏နောက်ဆုံးအလုပ်လုပ်သော port ကို download လုပ်ပါ
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် Galaxy S9 ၏ Exynos ဗားရှင်းအတွက်ပုံတူ mode နှင့် Google Pixel ၏ HDR + 2017 ကိုအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုသည့်အလုပ်လုပ်သော port တစ်ခုရှိသည်။
Galaxy View2သည် Wi-Fi Alliance နှင့် Bluetooth SIG အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုရရှိသည်
သြဂုတ်လကုန်မှာကျွန်တော်တို့ဟာသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုပဲ့တင်ထပ်နေပါတယ်။ ကိုရီးယားကုမ္ပဏီဟာ Samsung Galaxy View2ဒုတိယမျိုးဆက်ကိုဒုတိယမျိုးဆက်မှာအလုပ်လုပ်နေတယ်၊ ​​လိုအပ်ပြီးညီတူညီမျှအရေးကြီးတဲ့အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ၂ ခုကိုရရှိပြီးနောက်ဈေးကွက်ထဲ ၀ င်လာတော့မယ်ဆိုတာဖော်ပြတယ်။
OPPO Find X ကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်တရားဝင်ရောင်းချသည်
OPPO Find X သည်စပိန်သို့တရားဝင်ရောက်ရှိလာသည်။ စပိန်တွင်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်ဖုန်းအသစ်စတင်ခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ
Samsung က Galaxy S10 ကို 5G ဖြင့်ထုတ်လုပ်မည်
Samsung သည် Galaxy S10 တွင် 5G အထောက်အပံ့ဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ဈေးကွက်တွင်ဖြန့်ချိမည့်အဆင့်မြင့်ဗားရှင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Nokia9၏ပုံရိပ်အသစ်ထွက်ပေါ်လာသည်
Nokia9ကင်မရာငါးလုံး၏ပုံရိပ်သစ်ထွက်ပေါ်လာ အမှတ်တံဆိပ်၏ high-end အသစ်နှင့်၎င်း၏နောက်ကင်မရာငါးခုအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Xiaomi Mi Band3ကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်ယနေ့ခေတ်တွင်ရရှိနိုင်သည်
ယခုသင်သည်စပိန်နိုင်ငံရှိ Xiaomi Mi Band3ကိုဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ။ စပိန်တွင်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏လက်ကောက်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Xiaomi Mi 8 Youth ၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များကိုစစ်ထုတ်သည်
မကြာသေးမီကပေါက်ကြားခဲ့သော Xiaomi Mi 8 Youth ၏အဓိကနည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ Xiaomi ကငါတို့အတွက်ဘာပြင်ဆင်ပေးခဲ့လဲသိလား။
Moto P30 Play သည် Motorola ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်လုံးဝပေါက်ကြားခဲ့သည်
Motorola ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် Moto P30 Play ကိုလုံး ၀ စစ်ထုတ်သည်။ မကြာမီစျေးကွက်သို့ရောက်ရှိတော့မည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Vivo X23 ကိုတရားဝင်ကြေငြာခဲ့သည်
Vivo X23: အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်တရားဝင်လွှတ်တင်ခြင်း။ ယနေ့တင်ပြတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏ဖုန်းအသစ်အကြောင်းအားလုံးရှာဖွေပါ။
Samsung Galaxy Watch ကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်ရနိုင်သည်
Galaxy Watch ကိုစပိန်တွင်တရားဝင်ရောင်းချသည်။ ကိုရီးယားအမှတ်တံဆိပ်နာရီအသစ်အကြောင်းစတင်လေ့လာပါ။
အမေဇုံက Fire HD 8 တက်ဘလက်အသစ်၊ ဒိုးနပ်လိုရောင်းတဲ့ထုတ်ကုန်မျိုးဆက်သစ်ကိုပြသလိုက်တယ်
Amazon သည် Fire HD 8 အသစ်ကိုစတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပြီဖြစ်ပြီးအိတ်ကပ်အမျိုးအစားအားလုံးအတွက်ယူရို ၉၉ ဖြင့် ၀ ယ်နိုင်သည်။
Xiaomi သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ဒုတိယအရောင်းရဆုံးဝတ်ဆင်နိုင်သောအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ ဤအပိုင်းရှိတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏ရောင်းအားအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
In-screen fingerprint sensor ပါဝင်သည့်ပထမဆုံး Samsung သည်အောက်တိုဘာလတွင်ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်
လက်ဗွေဖတ်စနစ်ဖြင့်ပထမဆုံး Samsung မော်ဒယ်ကိုအောက်တိုဘာလတွင်ရောင်းချမည်။ ဒီလက်မှတ်ဖုန်းစတင်ခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Nokia9၏ပထမဆုံးဓာတ်ပုံသည်၎င်း၏နောက်ကင်မရာငါးခုကိုကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုသည်
ပထမ ဦး ဆုံးအနေနဲ့ Nokia9ရဲ့ကင်မရာငါးလုံးကိုတွေ့ပြီ။ မကြာမီရောက်လာတော့မည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်၏အဆင့်မြင့်ဒီဇိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာပါ။
Samsung ၏ခေါက်နိုင်သောဖုန်းတွင်မျက်နှာပြင်နှစ်ခုပါရှိသည်။ နို ၀ င်ဘာလမှရောက်ရှိလာသောကိုရီးယားကုမ္ပဏီမှခေါက်။ ရသောဖုန်းအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Honor 8X နှင့် 8X Max ကိုကြီးမားသည့်မျက်နှာပြင်များနှင့်ကြီးမားသောဘက်ထရီများဖြင့်ပြသထားသည်
Honor 8X နှင့် 8X Max သည်တရားဝင်ဖြစ်သည်။ အခုကြေငြာခဲ့တဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကနေဒီအလယ်အလတ်တန်းစားကိရိယာနှစ်ခုအကြောင်းလေ့လာပါ။
Vivo V11 နှင့် V11i - အမှတ်တံဆိပ်၏ဖုန်းအသစ်များ၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ
Vivo V11 နှင့် V11i တို့ကိုယခုတင်ပြပြီးဖြစ်သည်။ တရုတ်ကုမ္ပဏီ၏စမတ်ဖုန်းအသစ်များအကြောင်းလေ့လာပါ။
Huawei P Smart + - Huawei မှအသစ်ဖြစ်သောကင်မရာလေးလုံးနှင့် AI ပါ ၀ င်သည်
Huawei P Smart + သည်တရားဝင်ဖြစ်သည်။ Kirin 710 ဖြင့်အသစ်သော terminal အသစ်၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသိထားပါ။
Nubia Z18 တွင်တရားဝင်: ၅.၉၉″ FullHD + မျက်နှာပြင်၊ Snapdragon 5.99 SoC နှင့်အခြားအရာများဖြစ်သည်
Nubia Z18 ကိုကုမ္ပဏီမှတင်ပြခဲ့သည်။ အသစ်ကြေငြာထားသောစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ကိရိယာနှင့် ပတ်သက်၍ လေ့လာပါ။
Galaxy Note5နှင့် Galax S6 Edge + သည်လစဉ်လုံခြုံရေး update များကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်
ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ Samsung မှကြေငြာချက်အရ Galaxy Note5နှင့် Galaxy S6 Edge + တို့သည်ပုံမှန်လစဉ် update များကိုလက်ခံရရှိတော့မည်မဟုတ်ပါ။ Galaxy Note5နှင့် Galaxy S6 Edge အတွက်လစဉ်လုံခြုံရေး update များကိုလက်တွေ့မကျန်တော့ပါ။
Honor Play, ဤသည်မှာဂိမ်းကစားခြင်းအတွက် Honor ၏ကတိကဝတ်ဖြစ်သည်
ဤသည်မှာ Honor Play ဖြစ်သည်။ Honor သည်ဂိမ်းကစားခြင်းကဏ္toအတွက်အားသွန်ခွန်စိုက်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပြီးကစားသမားမဟုတ်သူများ၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်သည်။
Sony က Xperia XZ3 ကို6GB RAM ဖြင့်တရားဝင်ထိုင်ဝမ်စာမျက်နှာတွင်ချိတ်ဆွဲထားသည်
Sony ကထိုင်ဝမ်၏ Xperia XZ3 သည် 6GB RAM စွမ်းဆောင်ရည်ပါရှိသည်။ ဤမကြာသေးမီကသတင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာပါ
စျေးကွက်ထဲတွင်ခေါက်ထားသည့်မျက်နှာပြင်ပါသည့်ပထမဆုံးစမတ်ဖုန်းဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ စျေးကွက်ရှိပထမဆုံးသောခေါက်ထားသည့်စမတ်ဖုန်းအနေဖြင့်လာမည့်နို ၀ င်ဘာလတွင် Samsung ၏လက်မှအလင်းကိုမြင်တွေ့နိုင်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
ဟုတ်ကဲ့၊ မကြာမီသင်သည် Galaxy Note9၏ Bixby ခလုတ်ကိုပိတ်နိုင်သည်
Samsung Galaxy Note9သည် Bixby ခလုတ်ကိုအသုံးပြုသူများအနေဖြင့်၎င်းတို့အလိုရှိသည့်မြေပုံကိုပြသရန်ခွင့်ပြုချက်အသစ်တစ်ခုကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။
သြဂုတ်လ ၂၀၁၈ တွင်အာဏာအရှိဆုံးဖုန်း ၁၀ လုံးကို AnTuTu Benchmark အရသိရသည်
Xiaomi Black Shark နှင့်အခြားသူများပါဝင်သည့်သြဂုတ်လလတွင်အင်အားအရှိဆုံးစမတ်ဖုန်း ၁၀ ခု၏ AnTuTu ကကျွန်ုပ်တို့ကိုသတ်မှတ်ပေးသည်။
Samsung ကနို ၀ င်ဘာလတွင်၎င်း၏ခေါက်နိုင်သောဖုန်းကိုမိတ်ဆက်မည်။ ယခုနှစ်အတွင်းကိုရီးယားကုမ္ပဏီ၏ဖုန်းရောက်ရှိလာခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Huawei Mate 20 Lite ကိုလာမည့်အပတ်တွင်စပိန်သို့ရောက်ရှိမည်
Huawei Mate 20 Lite ကိုစက်တင်ဘာ ၁၀ ရက်တွင်စပိန်နိုင်ငံတွင်ဖြန့်ချိမည် စပိန်သို့ Huawei ဖုန်းအသစ်ရောက်ရှိခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Huawei ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကကုမ္ပဏီအနေဖြင့်စမတ်နာရီများနှင့်ပတ်သက်သည့်အပိုင်းကိုမမေ့သေးဘဲထိုက်တန်သည့်ပြိုင်ဘက်တစ် ဦး ကိုဖန်တီးရန်ကြိုးပမ်းနေသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
Samsung ကဖုန်းနောက်ဘက်ကင်မရာလေးလုံးပါ ၀ င်မှာလား။
Samsung ကဖုန်းနောက်ဘက်ကင်မရာလေးလုံးပါ ၀ င်နိုင်သည်။ ကိုရီးယားအမှတ်တံဆိပ်မှဤဖုန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါက
OnePlus 9.0 အတွက်ပထမဆုံး Android6Pie Open beta ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်
OnePlus သည် OnePlus 9.0 အတွက် Android6Pie Open beta ကိုလွှတ်တင်သည်။ ဤ high-end open beta ၏အစနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာပါ။
Motorola P30 Note ကို 6.2″ FHD + panel, notch, SD636 နှင့် 5.000 mAh ဘက်ထရီတို့ပါရှိသည်။
Motorola P30 Note ကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်စတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီကမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သော mid-range device အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
စတင်ပြီးနှစ်ရက်အကြာတွင် Honor 8X သည် TENAA တွင်ပေါက်ကြားခဲ့သည်
Honor 8X ကိုတရုတ်အေဂျင်စီ TENAA တွင်ထပ်မံပေါက်ကြားခဲ့သည်။ ဒီကိရိယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာကိုထုတ်ဖော်ပြသသလဲဆိုတာပိုမိုလေ့လာပါ။
Sony Xperia XZ3 ကိုဥရောပတွင်ကြိုတင်မှာယူနိုင်သည်
Sony Xperia XZ3 အတွက်ကြိုတင်မှာကြားထားသည့်ကာလကိုဥရောပ၌စတင်သည်။ Sony ၏ high-end သစ်ကိုယနေ့ဥရောပတွင်သိုထားနိုင်သည်။
Nubia Red Magic2တွင် Snapdragon 845 နှင့်အထက်ထောင့်ရှိခလုတ်များပါရှိသည်
Nubia Red Magic2တွင် Qualcomm Snapdragon 845 SoC နှင့်ခလုတ်များပါ ၀ င်သည်။ မကြာသေးမီကဖော်ပြခဲ့သည့်ယိုစိမ့်မှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
အမေဇုံ - ဖုန်းများနှင့်တက်ဘလက်များသို့ကျောင်းမှအထူးလျှော့စျေးများသို့ပြန်သွားပါ။ ကျောင်းသို့ပြန်လာသည့်အခါစတိုးတွင်အရောင်းမြှင့်တင်မှုပြုလုပ်သောထုတ်ကုန်များကိုရှာဖွေပါ
Samsung က Xiaomi နှင့် OPPO သို့ခေါက်ထားသည့်ဖန်သားပြင်များကိုထောက်ပံ့ပေးသည်
Xiaomi နှင့် OPPO သည် Samsung မှခေါက်ဖန်သားပြင်များရရှိသည်။ ဒီနယ်ပယ်မှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီနှစ်ခုရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Meizu M8 သည် TENAA ကိုဖြတ်သန်းပြီး၎င်း၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များကိုပြသသည်
Meizu M8 သည် ၅.၇ လက်မ HD + မျက်နှာပြင်နှင့် 5.7 GHz octa-core ပရိုဆက်ဆာနှင့်အတူ TENAA ကိုနှိပ်ပါ။ မင်းကိုချဲ့ထွင်မယ်
Sony Xperia XZ3 စျေးနှုန်းကိုဥရောပတွင်ထုတ်ဖော်ပြသ
ဥရောပတွင် Sony Xperia XZ3 ၏နောက်ဆုံးစျေးနှုန်းကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ High-end သစ်ကိုဥရောပတွင်ရရှိနိုင်မည့်စျေးနှုန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုရှာဖွေပါ။
စမတ်ဖုန်းအသစ်တွေအားလုံးဆင်တူတယ်လို့မထင်ဘူးလား။ Notch၊ dual camera ... ကုမ္ပဏီတခုကကွဲပြားခြားနားတဲ့အရာတစ်ခုခုဖန်တီးဖို့အချိန်ယူခဲ့တာမဟုတ်လား။
EMUI 9-based Android Pie beta သည် Huawei နှင့် Honor တွင်ဖြစ်သည်
ပထမဆုံး Huawei နှင့် Honor ဖုန်းများတွင် Android Pie beta ရှိသည်။ EMUI9နှင့်ဘယ် beta များရှိပြီးသောမော်ဒယ်များကိုရှာဖွေပါ။
Google ကယခုနှစ် Pixel Watch ကိုထုတ်မည်မဟုတ်
Google ရဲ့ Pixel Watch ကိုဒီနှစ်မှာဖြန့်ချိမှာမဟုတ်ဘူး။ Google Watch ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်စတင်မည်မဟုတ်သည့်အကြောင်းရင်းများကိုပိုမိုရှာဖွေပါ။
ZTE ၏ပထမဆုံး 5G ဖုန်းကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင်စတင်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်
၂၀၁၉ ခုနှစ်အကုန်ပိုင်းတွင် ZTE သည်၎င်း၏ပထမဆုံး 5G ဖုန်းကိုစတင်ဖြန့်ချိမည်။
ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်သောကင်မရာဖုန်းကို Lenovo မှထုတ်လုပ်မည်
Lenovo သည်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်သောကင်မရာဖုန်းဖြင့်လည်းအလုပ်လုပ်သည်။ Lenovo မှလက်ရှိလုပ်ဆောင်နေသောဤဖုန်း၏အယူအဆကိုရှာဖွေပါ။
ဒီနှစ်ကျရင် Samsung က Galaxy J Prime မော်ဒယ်နှစ်မျိုးကိုထုတ်လုပ်တော့မယ်
ဆမ်ဆောင်းဟာ Galaxy J Prime ဖုန်းအသစ်နှစ်ခုကိုဆောင်း ဦး မှာကျမှာပါ။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏အနိမ့်ဆုံးဖုန်းအသစ်များအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Huawei P20 သည်စီးရေ ၁၀ သန်းကျော်ရောင်းချသည်
Huawei P20s သည်ရောင်းအားသည်စီးရေ ၁၀ သန်းကျော်သည်။ ကမ္ဘာတဝှမ်း Huawei ၏အဆင့်မြင့်အရောင်းများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
OnePlus သည်၎င်း၏ပထမဆုံးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစတိုးဆိုင်ကိုဥရောပ၌ပဲရစ်မြို့တွင်ဖွင့်လှစ်လိမ့်မည် ပြင်သစ်မြို့တော်ရှိတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏စတိုးဆိုင်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Sharp သည်၎င်း၏ဖုန်းအသစ်သုံးမျိုးကိုဥရောပအတွက်ပေးခဲ့သည်။ ဥရောပ၌ဖြန့်ချိမည့်ဂျပန်အမှတ်တံဆိပ်၏ဖုန်း�